Excel Formula ho an'ny fanadiovana data matetika | Martech Zone
Nandritra ny taona maro dia nampiasaiko io loharanom-baovao io ho loharanom-pahalalana mba tsy hilazalazana ny fomba fanaovana zavatra fotsiny, fa mba hitahirizana rakitra ho ahy ihany koa hijerena azy any aoriana! Androany, nanana mpanjifa izahay izay nanolotra anay rakitra tahirin-kevitra momba ny mpanjifa izay loza. Saika diso endrika avokoa ny saha rehetra ary; vokatr'izany dia tsy afaka nanafatra ireo angona izahay. Na dia misy add-on tsara aza ho an'i Excel hanadio amin'ny alàlan'ny Visual Basic, dia mihazakazaka Office for Mac izahay izay tsy hanohana makrô. Raha tokony ho izany dia mitady formula mahitsy izahay hanampy. Nieritreritra aho fa hizara ny sasany amin'ireo eto mba hampiasan'ny hafa azy ireo.
Esory ireo olo-malaza tsy isa
Matetika ny rafitra dia mitaky ny fampidirana nomeraon-telefaona ao anaty raikipohy manokana 11 isa miaraka amin'ny kaody firenena ary tsy misy mari-tsoratra. Na izany aza, matetika ny olona no mampiditra an'ity angona ity amin'ny tadiny sy fe-potoana fa tsy. Ity misy raikipohy tsara manala ireo tarehintsoratra tsy isa rehetra amin'ny Excel. Ny raikipohy dia mamerina mandinika ny angona ao amin'ny sela A2:
Azonao atao izao ny maka tahaka ny tsanganana vokariny sy ny fampiasana azy Amboary> Soatoavina apetaho hanoratra amin'ny data miaraka amin'ny valiny voalamina tsara.
Tombano amin'ny sehatra maromaro ny OR
Matetika izahay dia manadio ireo firaketana tsy feno amin'ny fanafarana. Tsy tsapan'ny mpampiasa fa tsy mila manoratra raikipohy hirakira sarotra foana ianao ary afaka manoratra fanambarana OR fa tsy. Amin'ity ohatra eto ambany ity dia tiako ny manamarina A2, B2, C2, D2, na E2 raha tsy misy angona angona. Raha misy angona tsy hita dia averiko ny 0, raha tsy izany 1. Hanampy ahy handamina ny baiko ny data ary hamafa ireo firaketana izay tsy feno.
Manasaha sahan'ady mifangaro
Raha manana sahan'ny anarana voalohany sy farany ny angonao, fa ny anaranao kosa manana ny saha feno dia azonao atao ny mampifanaraka tsara ireo saha ireo amin'ny alàlan'ny fampiasa ao amin'ny Excel Function Concatenate, fa aza hadino ny mampiasa TRIM hanalana ireo habaka banga taloha na aorian'ny lahatsoratra. Fonosinay TRIM ny saha manontolo raha toa ka tsy misy angona ny iray amin'ireo saha:
Zahao ny adiresy mailaka mety
Fomba tsotra tsara tarehy izay samy mitady ho an'ny @ ary. amin'ny adiresy mailaka:
Esory ny anarana voalohany sy ny anarana farany
Indraindray, ny olana dia ny mifanohitra amin'izay. Ny angon-drakitrao dia manana sehatr'asa feno fa mila manafoana ny anarana voalohany sy farany ianao. Ireo formula ireo dia mitady ny elanelana misy eo amin'ny anarana voalohany sy anarana farany ary maka ny soratra raha ilaina. IT ihany koa no mitantana raha tsy misy ny anarana farany na misy fidirana banga ao amin'ny A2.
Ary ny anarana farany:
Fero ny isan'ny endri-tsoratra ary ampio…
Te-hanadio ireo famaritana meta nataonao ve ianao? Raha te-hisintona ny atiny ho any Excel ianao avy eo, alefaso ny atiny hampiasana ao amin'ny saha Meta Description (litera 150 ka hatramin'ny 160), azonao atao izany amin'ny alàlan'ity paikady ity My Toerana. Manadio madio ny famaritana amin'ny habaka iray avy eo manampy ny…:
Mazava ho azy, tsy natao ho feno ireo,… raikipohy haingana mba hanampiana anao hanomboka! Inona ireo rijan-kevitra hafa hitanao fa ampiasainao? Ampio izy ireo ao anaty hevitra ary omeko anao ny voninahitra rehefa manavao ity lahatsoratra ity aho.
Tags: jereo ny adiresy mailaka excelmanova sanda fametahanaExcelexcel aryadiresy mailaka excelexcel concatenatemahita excelformel excelformel excelexcel sisatsara ankavananafikarohana lehibefisarahana excelisa nomeraon-telefaonaraikipohyMicrosoft ExcelMicrosoft Officetsy numericmametaka soatoavina